23 ပတ်သားကလေး - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » Latest Health Informations » ကလေးပြုစုစောင့်ရှောက်ခြင်း » ကလေးငယ်ပထမနှစ် » 23 ပတ်သားကလေး
ရေးသားသူ Dr. Su Sandy ဆေးပညာပိုင်းဆိုင်ရာတည်းဖြတ်သူ Dr. K Zin Thwe
သင့်ကလေးသည် ရွေ့လျားနေသော အရာများနောက်ကို လိုက်ခြင်းနှင့် ပစ္စည်းအသေးများကို တွေ့ရှိတတ်ခြင်းတို့ တိုးတက်လာပါလိမ့်မည်။ ယခုအရွယ်တွင် ပစ္စည်းများကို တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းသာတွေ့ရလျှင်လည်း မှတ်မိတတ်သည်။ စောင်အောက်ရှိ သူ၏ ကစားစရာကို ရှာတွေ့တတ်သည်။ ထိုအရာသည် နောက်လအနည်းငယ်တွင် သူကစားနိုင်မည့် တူတူပုန်းတမ်း၏ အခြေခံဖြစ်သည်။
သင်သူ့ကို ချီထားချိန်တွင် အနားရှိပစ္စည်းတစ်ခုခုကို လှမ်းယူနိုင်ပြီး တစ်ခုရလျှင် နောက်တစ်ခုရဖို့ ထပ်ကြိုးစားသည်ကို သင်သတိပြုမိလိမ့်မည်။
၂၃ ပတ်တွင် သင့်ကလေးသည် –
• အထောက်အကူမပါဘဲ ထိုင်နိုင်သည်။
• အလွန်သေးသောပစ္စည်းကို ရှာတွေ့နိင်ပြီး ရွေ့နေသော ပစ္စည်းများနောက်သို့ လိုက်နိုင်သည်။
• စောင်အောက်တွင် သူကြိုက်သော ပစ္စည်းကို ရှာနိုင်သကဲ့သို့ ပစ္စည်းများကို တစ်ပိုင်းတစ်စမြင်ရုံနှင့် မှတ်မိတတ်သည်။
• သူ့အနားရှိ ပစ္စည်းများကို လက်လှမ်းယူနိုင်သည်။
ကလေးကို မည်ကဲ့သို့ ကူညီထောက်ပံ့ပေးနိုင်ပါသနည်း။
၂၃ ပတ်တွင် ကလေးသည် အရောင်များကို သိစပြုလာသည်။ အရောင်ပါသော စာအုပ်များဖတ်ခြင်း၊ အရောင်စုံအတုံးများနှင့် ကစားခြင်းသည် သင့်ကလေး အရောင်များကို သင်ယူနိုင်ရန် ကူညီနိုင်ပါသည်။ ကလေးသည် အသစ်အဆန်းဖြစ်သော ကစားစရာများကို ဆက်ရန် သို့မဟုတ် တပ်ဆင်ရန်ပေးပါ။ ပုံစံများကို သတိပြုမိနိုင်စွမ်းတိုးတက်စေရန်အထောက်အကူပြုနိုင်သည်။
ယခုလတွင် ဆရာဝန်များသည် ကလေးအတွက် ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးရန် မစီစဉ်ကြပါ။ ကောင်းသည့်အချက်မှာ ကလေးတွင် ပြသနာ တစ်စုံတစ်ရာမရှိခြင်းဖြစ်ပြီး မကောင်းသည့်အချက်မှာ ကလေးဘယ်လိုကြီးပြင်းနေသည်ကို သင်သတိမပြုနိုင်ဖြစ်နိုင်သည်။ နောက်တစ်လ တွေ့ဆုံလျင် မေးခွန်းများကို ပြင်ဆင်ပါ။ သင့်တွင် စိတ်ပူနေသည်များရှိလျှင် သင့်ဆရာဝန်ကို တိုင်ပင်ရန် ၀န်မလေးပါနှင့်။
ကျွနု်ပ် ဘာတွေ သိထားသင့်ပါသလဲ။
အာက်ပါတို့သည် သင်သိထားသင့်သော အကြောင်းအရာများဖြစ်နိုင်ပါသည်။
သင့်ဆရာဝန်သည် လက်ရှိ ကလေး၏ ကြီးထွားမှု အခြေအနေကို သိရှိရန် အရပ်၊အလေးချိန်၊ ခေါင်းလုံးပတ် အတိုင်းအတာများကို အရင်က အတိုင်းအတာများနှင့် နှုိုင်းယှဉ်ခြင်းဖြင့် သုံးသပ်နုိုင်ပါသည်။ အတိုင်းအတာများတွင် ရုတ်တရက် ပြောင်းလဲမှုရှိလျင် သင့်ကလေးသည် အာဟာရစုပ်ယူမှုကို ထိခိုက်စေသော ကျန်းမာရေးပြသနာတစ်ခုခု ခံစာနေခြင်းဖြစ်နုိုင်သည်။ သင့်ဆရာဝန်သည် ကြီးထွားမှုနှုန်းကို အသုံးပြုပြီး သင့်ကလေး ကြီးထွားတိုးတက်မှုကို အခြားရွယ်တူကလေးများနှုင့် နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပါလိမ့်မည်။
ကလေးများတွင် ကြီးထွားမှုနှုန်း မတူညီသည့်အတွက် သင့်ကလေး ကိုယ်အလေးချိန်တက်လျှင် စိတ်မပူပါနှင့်။ ကလေးများသည် အချိန်တစ်ခုအတွင်းတွင် ဖြည်းဖြည်းချင်း တိုးတက်နိုင်သည်။ နောက်ဆုံးအချိန်တွင် အများကြီး တိုးတက်သွားသည်လည်း ဖြစ်နိုင်သည်။ တိုးတက်မှုနှုန်းမြန်ခြင်းနှင့် ကိုယ်ခန္ဓာညွှန်းကိန်းသည် မျိူးရိုးဗီဇပေါ်တွင် မူတည်နိုင်ပါသည်။ ထို့အပြင် ကလေး၏ကျန်းမာရေးကို ပတ်ဝန်းကျင်၊နှင့် လှုပ်ရှားမှုအခြေအနေများကဲ့သို့သော အခြားသော အမျိုးမျိုးသော အချက်များက လွှမ်းမိုးနိုင်ပါသည်။ သင့်တွင် စိတ်ပူနေသည်များရှိလျှင် ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ။
လက်ချောင်းများ၊ ခြေချောင်းများ၊ လက်များ၊ ခြေထောက်များ၊နားရွက်များသည် စိတ်ဝင်စားစရာ အရာများဖြစ်သည်။ သင့်ကလေးသည် သူ၏ ခန္ဓာကိုယ် အစိတ်အပိုင်းများကို စတင်စူးစမ်းစပြုလာသည်။ သူ့နားရွက်ကို ဆွဲကိုင်ခြင်းသည် နေမကောင်းဖြစ်ခြင်းမဟုတ်ဘဲ စိတ်ပူစရာမရှိပါ။ အခြား မအီမသာဖြစ်ခြင်းနှင့် အဖျားရှိလျှင် နား၊ သွား ရောဂါများဖြစ်နုိုင်သောကြောင့် ဆရာဝန်နှင့် ပြသရန်လိုအပ်ပါသည်။
သင့်ကလေးသည် နှင်းခူ ကဲ့သို့သော အရေပြားရောဂါခံစားရနိုင်ပါသည်။ ထိုအခါ အရေပြားတွင် အကွက်များဖြစ်ပြီး ယားယံနိုင်ပါသည်။
အောက်ပါတို့သည် နှင်းခူ ကို ကုသရာတွင် အထောက်အကူဖြစ်စေနုိုင်သည်။
• လက်သည်းညှပ်ခြင်း၊ ကုတ်လျှင် ဒဏ်ရာမရစေရန် လက်သည်းကို တိုတုိုညှပ်ပေးထားပါ။
• ရေကို အကြာကြီးမချိူးပေးရ။ ဆပ်ပြာ၊ ရေတို့နှင့် အကြာကြီး ထိတွေ့ပါက အရေပြားကို ခြောက်သွေ့စေသည့်အတွက် ရေချိုးချိန်ကို ၁၀ မိနစ် – ၁၅ မိနစ် ထက်မပိုစေပါနှင့်။ သင့်ကလေးကို ဆပ်ပြာရည်ထဲတွင် စိမ်ပြီး ရေချိုးခြင်း မလုပ်သင့်ပါ။ သင့်ကလေးကို အရေပြားမခြောက်သွေ့စေရန် လိုးရှင်း လိမ်းပေးပါ။
• လိုးရှင်း လိမ်းပေးခြင်း။ ရေချိုးပြီး လျှင် လိုးရှင်း လိမ်းပေးခြင်းဖြင့် ဓာတ်မတည့်မှုများသက်သာနိုင်သည်။ အဆီ သို့မဟုတ် ခရင်မ် များအသုံးမပြုသင့်ပါ။
• ပတ်ဝန်းကျင်ကို အရမ်းမအေး၊ အရမ်းမပူအောင် ထိန်းညှိပါ။
• ချည်ထည်ဖြင့်လုပ်သော အ၀တ်အစားများကို ၀တ်ဆင်ပေးပါ။
• ဆရာဝန်၏ ညွှန်ကြားချက်အတိုင်း အာဟာရကို ထိန်းညှိပါ။ နှင်းခူကို ပိုဆိုးစေမည့် အစားအသောက်များကို ရှောင်ပါ။
အောက်ပါတို့သည် သင်စိုးရိမ်နေသော အကြောင်းအရာများဖြစ်နိုင်ပါသည်။
သင့်ကလေးကို သန့်သန့်ပြန့်ပြန့် အစားကျွေးရန်မဖြစ်နုိုင်ပါ။ အမေ၏ ပေါင်ပေါ်တွင် အစားကျွေးခြင်းသည် အကောင်းဆုံးဟု ထင်ကြသော်လည်း တကယ်တမ်းတွင် အဆင်မပြေပါ။ ကလေးကို အစာကျွေးရန် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းမှာ လုံခြုံသောခုံပေါ်တွင် ကျွေးခြင်းဖြစ်သည်။ သင့်ကလေးကို ခုံပေါ်တွင် လုံခြုံရေးခါးပတ် ပတ်ပြီး စောင့်ကြည့်ရင်းထမင်းကျွေးနိုင်သည်။ ခါးပတ်ကြိုးတပ်ဆင်ထားလျက်နှင့်ပင် ကလေးသည် ပြုတ်ကျနိုင်သေးသည်။ ထို့ကြောင့် သတိတော့ထားပါ။ သင့်ကလေး ကောင်းစွာထိုင်နုိုင်လျှင် ခုံအမြင့်နှင့် ပြောင်းနိုင်သည်။
ထို့နောက် ၂၄ ပတ်တွင် ကလေးသည် မည်သို့ဆက်လက်ကြီးထွားမည်နည်း။
Murkoff, Heidi. What to Expect, The First Year. New York: Workman Publishing Company, 2009. Print. Page